Madaxweynaha oo Khudbad ka Jeediyay Xuska Sannad Guurada 27aad ee 18 May Digniinna u Diray Soomaaliya
Hargeysa(Dawan)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa si adag uga hadlay weerar gardaro ah oo ciidammada dawladda Soomaaliya ee Puntland ku soo qaadeen fadhiisimada ciidanka qaranka ee jiida Tuka-raq ee gobolka Sool.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu caddeeyey in ciidammada qaranku ay jabiyeen isla markaana ay ka furteen Gaadiid iyo Saanad Milatari ciidanka Soomaaliya ee soo duulay.
Madaxweynuhu wuxuu sidaas ku sheegay khudbad taariikhi ah oo uu shalay u jeediyay shacbiga Somaliland munaasibadda 18ka May oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda, waxaanu shaaca ka qaaday in Jamhuuriyadda Somaliland ay horumar ka sameysay dhinacyada dawladnimada, dimuqraadiyadda iyo nabad kula noolaanshaha dalalka jaarka ah.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kale oo uu tafaasiil ka bixiyey in Somaliland ay caalamka kaga raadsanayso horumarkeeda iyo waxqabadka u tisqaaday rubuc-qarnigii la soo dhaafay.
Khudbadii madaxweynaha oo dhammaystirani waxay u dhignayd sidan:-
Walaalayaal: Somaliland waxay maanta maraysaa marxalad aad u wanaagsan, oo haysata fursado wacan, saaxiibo badanna yeelatay. Hase yeeshee, Cadawgeenu ma quusan, waxaanu wali ku hawlan yahay hagar-daamada iyo xagal-daacinta Qarankeena. Quluub wada jira iyo isku-duubni baynu kaga guulaysan karnaa. Cadowgayagana waxa aanu u sheegaynaa maanta gacanna waxa aanu ku haynaynaa difaaca dalka, gacanna waxa aanu ugu dabbaal degaynaa qaran-nimadayada Somaliland.
Walaalayaal: Waxa dareen xanuun badan nagu haya xukuumad ahaan dhibaatada uu u gaysan karo qiima dhaca shillinka Somaliland dadweynaha dan-yarta ah. Annagoo arrintaa ka dam-qanayna, waxa aannu qaadnay talaabooyin wax-ku-ool ah oo ku keenay maanta isbedel la dareemi karo suuqyada Sarifka dalka, Ilaa sicir bararku meesha kabaxana, hayaanka iyo halganka waynu wadaynaa.
Walaalayaal; Ka midho-dhallinta hammiga iyo hiigsiga Qarankeenu waa mudnaanta koowaad ee Siyaasadda Arrimaha Dibedda ee Xukuumadan.
Walaalayaal: Somalia oo dhibaato badani inna soo dhex-martay 30-kii sanno ee aynu wax wada la-hayn, waxa waajib ku ah in ay xaqiiqda waajahaan. Xaqiiqdu waxa weeyi, 27 sanno ka hor ayaynu kala baxnay, oo noqonay laba dal oo ku dhisan xuduudihii Isticmaarka, sida ay dhigayaan shuruucda iyo Axdi Qarameedka Midowga Afrika.
Waxa aan u caddaynayaa Bulshada Caalamka in Somalia iyo Somaliland wixii ka dhaxayn jiray aannu diyaar u nahayQaran ahaan in lagu fur-daamiyo wada-hadal iyo nabad. Haddiise la nala garan waayo, oo la iska dhaga-mariyo nabadda iyo walaalnimada, waxaan u sheegayaa Somalia iyo Bulshada Caalamkaba in aannu cudud iyo awood buuxda u leenahay in aannu difaacno Qarankayaga, isla markaana aannu cadawga u gaysano dhirbaaxooyin aannu ka soo waaqsan karin abid.